Trenitalia Train Tiketi na Ahịa Ego | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Trenitalia Train Tiketi na Ahịa Ego
na 2005, na Uhie uhie 1000, Emere uzo uzo uzo uzo Trenitalia nke ngwa ngwa. Ọsọ ọsọ nke Frecciarossa 1000 na-eru 300km kwa elekere.
The isi International ụgbọ okporo ụzọ bụ n'etiti Geneva na Milan na ọ na-ewe 4 awa na Trenitalia.
Nke ụgbọ oloko trenitalia ị na-agagharị n'okporo ụzọ ụgbọ elu dị ọsọ 3km kwa awa.
Nọmba 1: Detuo tiketi Trenitalia gị tupu ị nwere ike
Nọmba 2: Njem nke Trenitalia mere na oge adighi nma
Nọmba 3: Denye tiketi maka Trenitalia mgbe ijiri usoro nhazi njem gị
Ọrụ ụgbọ oloko Trenitalia nwere nnukwu ihe achọrọ. Enwere ike igbanwe tiketi Trenitalia Base ụgbọ oloko ma gbanwee na enweghị mmachi na tiketi ticketkpụrụ Ọchịchị nwere ike gbanwee naanị otu oge tupu ụbọchị ụgbọ oloko ahụ. Cannot nweghị ike ịgbanwe ma ọ bụ kwụghachi tiketi ndị ọzọ Trenitalia, ma e nwere ndị forums na internet na i nwere ike na-ere gị Trenitalia tiketi abụọ-aka. Dokwaa nkwanye ụgbọ oloko maka Njem Trenitalia bụ akwụkwọ mgbe ị ji n'aka na usoro njem gị.
Nọmba 4: Zụta tiketi Trenitalia gị na Save A Train
1) Ihe nke Trenitalia ụgbọ oloko na-amalite na eziokwu na i nwere ike apụ na-abata ozugbo na etiti obodo ọ bụla nke obodo na ị na-njem si. n'ezie, nke a bụ ihe pụrụ iche na ụgbọ oloko, karịsịa ma ọ bụrụ na ị zụọ njem si Rome, Milan, Florence, Geneva, ma ọ bụ Monaco, ọ bụ nnukwu uru maka Trenitalia. N'ihi n'eziokwu na njem ahụ na-eduga na etiti obodo, ị ga-ezere nsogbu okporo ụzọ na ọnweghị ihe kacha njọ karịa ịnọgidesi ike na okporo ụzọ ezumike.
Mgbe ọ bịakwutere Trenitalia tiketi ụgbọ elu ịnye ọnụahịa, ọnụahịa na-adịkarị iche. Tionsfọdụ n'ọkwa na-enye gị ohere inweta tiketi ụgbọ oloko dị ọnụ ala, ma n’oge ikpeaz ụ tupu ọpụpụ, na ahịa na-na-elu ma ọ bụrụ na-amasị gị ezigbo ejegharị, Trenitalia bụ maka gị!
Isi ihe dị iche n'etiti klaasị tiketi ụgbọ elu Trenitalia bụ enweghị mgbanwe nke mgbanwe tiketi, ahịa, na ọrụ. Ọzọkwa, a ọkọlọtọ Economy gbaa ụgbọ okporo ígwè bụ ndị dị ọnụ ala ma na ọtụtụ mgbanwe ụzọ njem na Italy.
Na Trenitalia Ọdụ ụgbọ okporo ígwè Standard Economy bụ ọnụ ala karịa ego ụgbọ mmiri Trenitalia niile. Ọ kasị mma ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi n'ọdịnihu n'ihi na isi tiketi ala price – ha na-ere ngwa ngwa. Ndị njem na-ejigide ọkọlọtọ ụgbọ okporo ọkọlọtọ nwere ike ịnwe akpa ha dabara na akpa ha, n'ihi na free na ike ịkagbu ha ụgbọ okporo ígwè tiketi tupu ọpụpụ na-enweta a ele mmadụ anya n'ihu nkwụghachi (nwepu ụgwọ nke 20%).
Na mgbakwunye na uru nke tiketi ụgbọ oloko Standard, Trenitalia Economy Premium tiketi na-enye ọmarịcha oche nwere ọtụtụ oche na oche oche na njem ogologo oge. Karịsịa ihe nile, enwere nhọrọ nri nri atọ ị nwere ike ịhọrọ na nri dị ọkụ na ọ drinksụ lightụ ka a ga-enye oche gị n ’oche ụgbọ oloko Trenitalia.
Nke Trenitalia Ahịa tiketi ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ uru niile anyị dere n'elu n'agbanyeghị, Ndị njem nke Trenitalia Business Premier na-erite uru site na ọtụtụ akpa akpa, oche ergonomic nke oche dị mma, ogologo ulo, atọ nri nhọrọ ịhọrọ site na. Ọzọkwa, ị nwere mgbidi maka nzuzo na ebe dị jụụ na Azụmaahịa ahọpụtara ebe ụgbọ oloko Trenitalia.
Nke Trenitalia Executive tiketi ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnụ ụtọ uru niile akpọrọ aha na mgbakwunye na mgbakwunye ergonomic na-anọdụ ala akpụkpọ anụ iji doo ha isi ma nwee ọ comfortụ n'echiche nke Italia..
Enwere njem maka Italytali, mana a na-atụ aro ya dịka nhọrọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụ njem njem 14 ụbọchị, ndenye aha na-enye ohere iji ụgbọ oloko na-achọ njem Italy. Enwere 3 Ọ gafere ọkwa dị: Easy, Nkasi Obi, na Executive ma ị nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ nke njem ndị na-esite 3 ka 10 ma họrọ ụdị ụgbọ oloko ahụ site na Frecce na-agba ọsọ ọsọ ruo intercity na EuroCity.
Trenitalia kpuchie Italytali niile, Otú ọ dị, ndị isi mba ọdụ bụ Milan, Rome, Venice, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, na Verona. Enwere 11 mba ofesi: 5 Traingbọ okporo ígwè Trenitalia na Switzerland na 6 ọdụ na France na ole na ole n’Austria na Germany na Croatia. Yabụ n'ụzọ doro anya na ị nwere ike ị ga-enwe nkasi obi na ngwa ngwa ịga njem site na European mara mma ma nwee mmasị na echiche ndị Itali na-enweghị efu ihe ọ bụla!
Naples ọnụ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Old Town. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ime ụfọdụ njem njem ụbọchị site na Naples gaa Pompeii ma ọ bụ Sorrento, mgbe ahụ ị ga - akwụsị n'ụgbọ okporo ígwè Naples maka njem ụgbọ oloko gị.
N'otu aka ahụ dị mkpa bụ na-ewetara onwe gị na Trenitalia njem dị oké mkpa. N'elu ya jide n'aka na ịnwe akwụkwọ njem Trenitalia na ekwentị gị ma ọ bụ nke e biri ebi na paspọtụ ziri ezi ga-enwerịrị ma ọ dị mma ịnwe mkpuchi mkpuchi njem.
Insgbọ okporo ígwè Trenitalia nwere ebe a na-ahụ anya ndị ọfeụ barụ cafe-raara nye nke a drinksụrụma na obere nri. Nchịkọta nhọrọ gụnyere sandwiches, chọkọleti chọkọleti, snacks, chọkọleti chọkọleti, kọfị, chọkoletị dị ọkụ, na tii ma ị ga - eri ihe ma drinkụọ ihe ọ inụ inụ n'ụgbọ okporo ígwè a ụlọ oriri na ọ whatụ orụ ma ọ bụ were ihe ị zụtara azụ n'oche gị. Ọ bụrụ na ị na-eme njem na Azụmaahịa, Ebere, ma ọ bụ mbụ na klas ị nwere ike họrọ a free welcome ọ drinkụ fromụ si otu nhọrọ nke 9 ihe ọ drinksụ drinksụ dị na ụtọ, savory, ma ọ bụ nri na-enweghị gluten. Na ụgbọ oloko niile nke Trenitalia, enwere oghere dị n'akụkụ oche gị.
Mgbe ịzụrụ Trenitalia tiketi gị tupu oge eruo, ị pụrụ ịnụ ụtọ Nnọọ ịntanetị WiFi na-akwụghị ụgwọ na Trenitalia frecciarossa ụdị ụgbọ oloko na klaasị.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.